क्रान्तिको नयाँ अध्याय सशक्त रुपमा अगाडि बढिरहेको छ : महासचिव किरण – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
क्रान्तिको नयाँ अध्याय सशक्त रुपमा अगाडि बढिरहेको छ : महासचिव किरण
प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ १४
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले क्रान्तको नयाँ अध्याय सशक्त रुपमा अगाडि बढिरहेको दावी गर्नुभएको छ । जनयुद्धका महान सहिद कृष्णसेन इच्छुकको १६ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव किरणले यस्तो दावी गर्नुभएको हो । इच्छुक साँस्कृतिक प्रतिष्ठानले आफ्नै सभाहलमा आइतबार आयोजना गरेको ‘इच्छुक स्मृति तथा साँस्कृतिक वलिदान दिवसको अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मान वितरण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै महासचिव किरणले भन्नुभयो, “जनयुद्धमा बगेको रगतको मूल्य उत्पीडित जनताका भावना, विचार, सपना कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सो कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ र विकल्पका रूपमा हामी मात्र बाँकी रहेका छौं । यसै गम्भीरतालाई मनन गर्दै हामीहरूले उच्च वैचारिक चेतनाद्वारा फेरि अर्काे महाक्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ ।”
जनयुद्ध र बलिदानको स्मरण गर्दै महासचिव किरणले भन्नुभयो, “जनयुद्धबाट आएको क्रान्तिकारी धार अन्तरसंघर्षका क्रममा वाम, दक्षिण र क्रान्तिकारी गरी तीन भिन्न धारहरूमा विभाजित भइसकेपछि बिसर्जनवादी धारहरूले अब क्रान्ति सम्भव छैन र सपना पनि बाँकी छैनन् भन्दै आए । तर, हामीहरूले सहिदका सपना बाँकी छन् भन्दै आएको छौं । त्यसैले हाम्रो काम अर्काे क्रान्तिको तयारी गर्नु रहेको छ । हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू अहिले यसै दिशातर्पm उद्दत छन् । यसका लागि हामीहरूले देशव्यापी संगठनको विस्तार गर्नुपर्छ । विगतका कटु अनुभवबाट पाठ सिक्दै नयाँ ढंगले अगाडि बढेका छौं । पुरानै सत्ता र सरकारमा गएर देश र जनताका महामारी रोगव्याधीको निराकरण गर्छाै भन्ने हामीमा विश्वास छैन । यदि हामीहरू सरकार र सदनमा जाने भए वाम गठबन्धन बन्ने बेलै जाने थियौं । तर हामीहरू गएनौं । हामीहरूले जनताका बीचमा गएर यी सबै कुरा बुझाउँछौं र जनतालाई आमूल परिवर्तनको दिशामा साथै लिएर जान्छौं भन्ने कुरामा विश्वास ग¥यौं ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामीहरूले सहिदहरूले देखाएको बाटो, सहिदहरूको आदर्श र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सपना र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा साँस्कृतिक योद्धहरूको बलिदान भुलेका छैनौं । राजनीतिक आन्दोलन साँस्कृतिक आन्दोलनबाट अलग हुन सक्दैन । आन्दोलनको क्रममा कसै–कसैले सहिदको सपना भुलेका होलान् तर हाम्रा सपनाहरू ज्यूँदै छन् । हाम्रो यात्रामा पूर्णविराम लागेको छैन । क्रान्ति निरन्तर जारी छ । त्यो महान् क्रान्तिको प्रक्रियामा हामी साँस्कृतिक मोर्चाबाट दृढतापूर्वक लागिपरिराखेका छौं ।”
सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तर चलिरहने आन्दोलनको एउटा खण्ड समाप्त भएको छ । तर, योसँगै क्रान्ति निरन्तरतामा अघि बढिरहेको छ । अहिले क्रान्ति नयाँ अध्याय सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छ । हिजो हामीहरूले जसरी जनयुद्ध र आन्दोलनहरूमा रगत बगाएका थियौं, त्यो बलिदान र त्याग आज पनि टड्कारो आवश्यकताको रूपमा अघि आएको छ । कसैले चाहेरै क्रान्ति सिद्धिनेवाला छैन । कसैले बिर्सिएर सपना भुलिइने छैन । क्रान्तिको आदर्श र यसको भविष्यका लागि हामी साँस्कृतिक मोर्चाबाट एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं ।”
कार्यक्रमको सुरुआतमा प्रतिस्ठानका सदस्य प्रा. डा. गोपिन्द्र पौडेलले उपस्थित सबैलाई स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत अभिवादन गर्दै इच्छुकको बहुमुखी प्र्रतिभाको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिस्ठानका सदस्य तथा कवि मित्रलाल पंगेनीले इच्छुकको ‘सेतु जैशीको घर’ शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिला योगीको कृति सपनाको विमोचन पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा रामसिंह श्रीस, इच्छुककी जीवन संगिनी प्राध्यापक तक्मा केसी, छोरी समीक्षा, पुरस्कृत तथा सम्मानितहरु सबैको आतिथ्यता ग्रहण गरिएको थियो ।
स्मृति दिवसमा हरेक वर्ष झैं पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । श्री मोदनाथ मरहट्ठा र विनोद विक्रम केसीलाई संयुक्त रुपमा इच्छुक स्मृति पुरस्कार र शोभा दुलाललाई साहित्यतर्फ तथा फूलमाया दर्जी प्रगति ‘हिङमाङ’ लाई कलातर्फको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । साथै अन्य सम्मानित हुने श्रष्टाहरुमा सुशीलसिंह ठकुरी, रमण थामी, मिना वाइवा, अनिश योन्जन, उषा जिम्बा, विहानी बिक, प्रगति हिङमाङ, निर्मला घिसिङ, अनिल योञ्जन र भरत लामा हुनुहुन्थ्यो ।